Ny Semalt dia manome fanasokajiana virosy amin'ny ordinatera
Virosy iray amin'ny computer iray dia programa maloto izay mameno ny tenany sy manova ireo rafitra hafa amin'ny ordinatera amin'ny fampidirana ny code manokana ao aminy. Ny fandaharan'asan'ny viriosy na viriosy dia manafika fitaovana maro be ary manakorontana ny olona amin'ny media sosialy. Eto i Alexander Peresunko, Semalt Manager Success Manager, dia niresaka momba ny karazana viriosy
Rehefa misy fitaovana elektronika fandefasana baoritra, dia voafetra ny fehezan-dalàna voafaritra ao anaty solaitrabe. Ireo fehezan-dalàna ireo dia mameno ny rafitra miasa, toy ny Linux, Unix, ary Windows. Rehefa vita ny fandefasana dia azonao atao ny manamarina sy manova ny fanalahidin'ny fitaovan'ny ordinateranao. Ny code dia fantatra amin'ny sehatra boot ary mijanona ao anaty tabilao boot ao amin'ny fitaovana elektronika mandritra ny fotoana fohy na maharitra. Amin'izao andro iainantsika izao, dia mahatsikaiky fa misy viri-sehatra bakteria amin'ny aterineto, saingy izy ireo dia misy amin'ny endrika iray na iray hafa ary afaka mampihena ny asan'ny rafitry ny ordinateranao.
Fandaharam-potoana na Infeo mpampiasa
Fandikana programa na rakitra an-tsoratra dia mameno ny rakitra sy programa amin'ny ordinateranao mandritra ny segondra. Matetika izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny rakitra C ao amin'ny fitaovana ampiasainao ary Windows miaraka amin'ny fanitarana toy ny .exe, .com, .bat, .sys, ary .pif. Ireo viriosy ireo dia mavitrika eo amin'ny fitaovana automatique ary manova ny angon-drakitra amin'ny rafitry ny ordinateranao..Ity virosy ity dia afaka mameno ny tenany ao amin'ny fahatsiarovana ary afaka mamerina mamaky ny rakitra.
Ny viriosy macro dia manimba ny tahirin-tsoratadidy, takelaka, ary ny fampisehoana ao amin'ny Microsoft Office. Ampidiriny ny fehezan-dalàna sy ny fametrahana rakitra hosoka isaky ny manokatra fampisehoana na dokam-barotra amin'ny Internet. Tsy fahita firy ireo viriosy ireo amin'izao fotoana izao ary lasa tsy fahita firy.
Ny soavalin'i Troy na ny soavalin'ny trozona
7) Ny teny hoe "horse trojan", dia avy amin'ny asa soratra mahazatra momba ny ady eo anelanelan'ny Grika sy ny mpiady ao amin'ny tanànan'i Troy. Noho izany, nivoaka ny anarana, ary ny soavaly troindy dia mikendry antonta manokana amin'ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa. Mivezivezy eo amin'ny rafitrao ireo viriosy ireo ary maka automatique. Avy eo dia mampiasa ireo trozona ny mpikirakira noho ny fangalàny ny fampahalalam-baovao saro-pady toy ny PayPal ID, ny antsipiriany momba ny carte de crédit, ny usernames, ny tenimiafina ary ny vaovao hafa. Ny Trojans mibaribary dia samy hafa amin'ny tranainy tsotra amin'ny fomba fisokafany amin'ny lamosina, izay mamela ireo hackers hifehy ny fitaovana elektronika. Ny adware sy ny spyware dia manelingelina ny fitaovana misy anao ary manova ny sehatr'ilay navigateur amin'ny ankapobeny. Manala ny fitaovana ampiasainao izy ireo ary manondraka ny rafitrao amin'ny pop-ups samihafa. Tsy mety ny milaza fa ny adware sy ny spyware dia miely lavitra kokoa noho ireo trojans malaky be sy manakaiky ny fitaovana rehetra sy ny rakitra keygen.
Virosy dia manely haingana. Afaka miditra amin'ny rafitry ny ordinateranao izy ary manimba tsangana maro be. Ny virus dia afaka mamono ny Wi-Fi ary mampihena ny asan'ny fitaovana. Ny kankana dia mamono ny mpampiasa ary maminavina ny namany, ny havany, ary ny mpanjifa. Tsy maintsy manokatra ny fanalahidy mailaka avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra. Milaza ny manam-pahaizana momba ny ordinatera fa mety hiparitaka ny kankana amin'ny tontolo iainana manerana izao tontolo izao. Ohatra, ny Mellisa sy ny Letter Love dia namorona fitaovana an-jatony maro eran-tany.
Rootkits dia rafitra rindrambaiko izay ahitana programa samihafa natao hanakona ny ordinateran'ny ordinatera, izay mahatonga azy ireo ho mora amin'ny hackers hanafika ny rafitrao. Ny rootkits dia manimba ny fitaovana ampiasainao; Manakana anao tsy hiditra amin'ny Task Manager, Registry Editor, ary antontan-taratasy mitovy amin'izany Source .